कसरी कुनै पनि सिमुलेटर बिना गृह फिर्ता निर्माण गर्न
र तपाईंले कहिल्यै घर फिर्ता पंप चाहन्थे छन्? सायद धेरै मानिसहरू एक सरल कारण लागि यो छैन। के को लागि? त्यहाँ घर फिर्ता पंप मात्र कुनै पनि विशेष व्यायाम उपकरण प्रयोग संग सम्भव छ भनेर एक राय छ, तर यो साँचो होइन। बस पढाइ राख्न र यो तपाईं आज गतिविधि सुरु गर्न सक्षम हुनेछ सम्भव छ।
कसरी घर मा आफ्नो फिर्ता निर्माण गर्न? वास्तवमा, तपाईं बस उपयुक्त व्यायाम र धैर्य को धेरै चयन गर्न आवश्यक छ। एक वा केही कसरत पछि, आफ्नो फिर्ता धेरै व्यापक हुने छैन। साथै, यो देखिने सबै, विरोध रूपमा छैन किनभने गर्न, उदाहरण, बाइसेप, triceps, छाती र पेट मांसपेशीमा लागि। तदनुसार, यस्तो अदृश्य रेल मांसपेशीमा कम। खैर, गरेको यो हटाइ समाधान गरौं र आफ्नो फिर्ता बलियो र सुन्दर बनाउने।
घर मा फिर्ता पंप गर्न के आवश्यक छ? हो, लगभग केही छैन। खींच-अप लागि Crossbar कुनै पनि घर Bodybuilder मा हुनुपर्छ। अन्यथा, तपाईंले प्राप्त र यार्ड मा गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि, तपाईं backrest कोण समायोजित गर्न सकिन्छ जसमा एक पीठ, साथै dumbbells आवश्यक हुनेछ। सबै व्यायाम उपकरण हो। को डम्बबेलनेबुला सन्दर्भमा, त्यसपछि आफ्नो वजन पनि समायोजित हुनुपर्छ। तिनीहरूले अध्ययन गर्न धेरै सजिलो छन्।
बारेमा प्रशिक्षण कुरा जारी फिर्ता मांसपेशी निर्माण गर्न कसरी घर, हामी अभ्यास गर्ने उत्प्रेरित गर्नेछ। हामी सबैभन्दा प्रभावकारी सबै फिर्ता मांसपेशिहरु प्रशिक्षण संलग्न यस मा प्रयास गर्नेछ। विशेष हामी लात्स् रुचि र त्यसपछि सबैलाई अरू छन्। कोचिंग फिर्ता सन्तुलित र सुरिलो विकास आधारित हुनेछ।
कसरी, घर मा आफ्नो फिर्ता निर्माण गर्न विशेष अभ्यास गर्दै। हामी समान रूप लोड वितरण गर्न प्रयास गर्नेछ। यसलाई केही सिफारिसहरू पूरा गर्न आवश्यक पनि छ:
प्रदर्शन कोर अभ्यास अघि आवश्यक न्यानो गरिनु पर्छ। यसरी, ironically मांसपेशिहरु अप, खुसीले गदगद छन् तिनीहरूले चोट कम खतरा हो।
पछाडि को मांसपेशिहरु अप पम्प कि मांसपेशिहरु ध्यान अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि कि फिर्ता को इच्छित राहत दिन सक्षम अभ्यास समावेश गर्नुहोस्। वृद्धि मांसपेशिहरु खाना प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेट मा समावेश बढवा दिन्छ।
लोड भएको व्यापक, वर्दी र अरूलाई साथै संलग्न मांसपेशी समूह एक यस्तो तरिका मा वितरण गरिनेछ।
कसरी घर फिर्ता निर्माण गर्न: मांसपेशिहरु एक पल्ट तान्नु-अप को माध्यम द्वारा recruited र आफ्नो छाती गर्न dumbbells पुल। यो मामला मा पट्टी राम्रो फिट, तर हामी खेल उपकरण को उपलब्धता सीमित गर्न सहमत छन् सम्भव छ। पनि एक सरल खींच-अप, विभिन्न बदलाव संग, हामीलाई विकास र फिर्ता मांसपेशिहरु को विभिन्न समूह बलियो बनाउन अनुमति दिन्छ। सबै हात पकड, जो व्यापक वा संकीर्ण हुन, अगाडि र गर्न सक्छन् उल्ट्याउन मा निर्भर गर्दछ।
यस्तो अभ्यास साथ घाँटी, छाती र विकास हात मांसपेशीमा। प्रत्येक कसरत विभिन्न तरिकामा एकान्तरण समावेश पट्टी मा पुल। आफ्नो छाती गर्न तान्नुहोस् dumbbells गरिरहेको घर मा आफ्नो फिर्ता कसरी निर्माण गर्न:
खुट्टा काँध चौडाई मा राखिएको हुनुपर्छ।
तल्ला गर्न समानान्तर हुन ताकि आवास अगाडि ढल्केको छ।
अब, आफ्नो हात मा एक डम्बबेलनेबुला लिन एक makeshift पट्टी गठन गर्ने तिनीहरूलाई सँगै पुग्नु।
आफ्नो छाती गर्न dumbbells पुल र फिर्ता तल डूब। जबकि यो गर्नुपर्छ फिर्ता राउण्ड छ। ढिलाइ बिना समान रूप सास फेर्न।
तपाईं Exhale रूपमा डम्बबेलनेबुला को सास मा उत्पादन जोर, फिर्ता सुरु स्थिति।
यो नै व्यायाम र पीठ मा प्रदर्शन गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ। यो गर्न, उनको पेट तल मा झूठ। Dumbbells को पीठ अन्तर्गत ढाँट्छन्। हामी हात मा तिनीहरूलाई लाग्न र नै मजबूत। तीन अन्य समूहहरूको लागि - सामान्य प्रशिक्षण जटिल Constituting फिर्ता मांसपेशिहरु को विकास मा चार व्यायाम, र दुई मा बारी।
पाँच भन्दा कम र बिस्तारै पन्ध्र वृद्धि पहिलो पटक नजिकिंदै को संख्या। तर peretruzhdaetsya मांसपेशीमा हुन सक्दैन! यो खराब छ जो प्रशिक्षण को नियमित, असर गर्न सक्छ।
शुरुआती लागि ड्राइभिङ पुस-अप। सही आफ्नो शरीर तालिम
"Epoetin अल्फा": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा र analogues
Numb हात: के
समीक्षा। बक्स-रोबोट कार: कसरी प्रयोग गर्ने?
Dymkovo खेलौना कसरी गर्नुभयो। बच्चाहरु र वयस्क लागि कथा
Lyudmila Gurchenko छोरी Mariya Borisovna Andronikashvili: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन